Kenya oo in kirtay dagaalkii Ceel-Waaq | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Kenya oo in kirtay dagaalkii Ceel-Waaq
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Ciidanka Kenya ayaa aroortii hore ee saakay oo Jimco ah waxa ay ku dagaalameen degmada Ceel-waaq oo ka tirsan Gobolka Gedo.
Dagaalkan wuxuu yimid kadib markii labada Ciidan ay kala shakiyeen, maadaama Ciidanka Kenya oo wata Saddex gaari oo nuuca dagaalka, kana babanayeen calan madow ay gudaha u soo galeen magaalada, iyada oo aysan jirin wax ogeysiis ah.
Xuseen Deyr Cadaawe oo ka tirsan saraakiisha Ciidamada xoogga dalka ayaa inoo xaqiijiyay in dagaalka uu ku geeryooday Gaashaanle Dhexe Maxamed Aadan Yuusuf (Ilka Case) oo ka mid ahaa Saraakiisha Ciidamada Xoogga dalka ee ku sugan Gobolka Gedo.
Kenya oo war ka soo saartay dagaalkan ayaa waxa ay sheegtay Ciidankooda in aysan qeyb ka aheyn dagaalka, ayna xalay Ciidamo iyaga ka tirsan ka bixin xerada ay ku leeyihiin xuduudka ay la wadaagaan Soomaaliya.
“Ciidanka Kenya wax lug ah kuma lahan, dagaalka ka dhacay Ceel-waaq, Ciidamadeena ma aysan tagin agagaarka Ceel-waaq, iska daa in ay gudaha u galaan, waxaan wadnaa baaris la xiriirta wararka sheegaya in Ciidankeena ay qeyb ka noqdeen dhacdadan.” Ayuu yiri Sarkaal u hadlay Ciidanka Kenya.
Warkan ka soo baxay Dowladda Kenya ayaa u muuqda mid ay isaga indha tireyso weerarka khasaaraha dhaliyay ee Ciidankooda ay ku qaadeen Ceel-waaq, sida ay inoo xaqiijiyeen dadka degaanka oo inoo sheegay in Ciidanka Kenya kuwa weerarka geystay.